Tani waa sida iska -caabbinta cusub ee iPhone 13 u dhacdo oo u naxdo | Wararka IPhone
Waxaan hore uga dignay bilowgii (kahor intaadan sii wadin inaad aragto maqaalkan) in sawirradu ay xasaasi u noqon karaan qaar badan oo idinka mid ah, laakiin sinaba uma aha fiidiyowyadan loo abuuray inay si hagar la'aan ah u jebiyaan moodooyinka cusub ee iPhone 13. Waa fiidiyowyo na tusaya adkaanta iyaga iyo si aan awoodno indhaheenna ku hubso iska caabbinta naxdinta iyo dhibcaha shilka ah.
Xaaladdan oo kale, fiidiyaha ugu horreeya ee aan wadaagi doonno ayaa sidoo kale ku daraya isbarbardhig xagga iska -caabbinta u dhexeeya iPhone 13 iyo Samsung Galaxy S21. Shaki la'aan waxay yihiin fiidiyowyo ka baxsan jabinta iPhone ama Samsung kaliya sababta oo ah waxaa loogu talagalay in lagu muujiyo iska caabbinta dhabta ah ee aaladahaan cusub.
Tan koowaad waa Fiidiyowga PhoneBuff taas oo ay isbarbar dhigaan iska caabbinta dhibicda u dhexeysa iPhone -ka cusub iyo Samsung Galaxy S13 Ultra:
Iyo in la dhammeeyo fiidiyowga kale ee youtuber-ka caanka ah EveryThingApplePro:
Waa inaan taas garwaaqsanno labada fiidiyowba waxay u noqon karaan kuwa xanuunsan kuwa isticmaala Apple iyo SamsungKuwani waa aalado qiimahoodu sarreeyo wayna xanuunaysaa in la arko sida ay u jabaan dhicitaan si cad u sababay. Dhinaca kale, runtii waa wax xiiso leh in lagu arko fiidiyowyadan iska caabin ay taleefannada cusub ee Apple yeelan karaan. Tani waa wax lagu muujiyey in badan oo xoogga la saaray dhacdadii bandhigga iyo ka dib daawashada fiidiyowyada waxay umuuqataa inay aad u adkaysi badan yihiin.
Hadda oo aan daawaneyno fiidiyowyadan, the tijaabooyinka adkaysiga ee taxanaha Apple Watch 7, kaas oo ay Apple sidoo kale aad ugu faantay soo bandhigistiisa. Waa inaad aragtaa fiidiyowyadan haddii mid ka mid ah YouTuber uu daabaco.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Terminalka IPhone » iPhone 13 » Tani waa sida iska -caabbinta cusub ee iPhone 13 u dhacdo oo u naxdo
Falanqaynta iPhone 13 Pro Max: maxaa iska beddelay taleefanka cusub ee Apple